दोस्रो ए वाई सी तिलक स्मृति रनिङ्ग शिल्ड सनपा १४ डिभर्नालाई - Arghakhanchi Saptahik
दोस्रो ए वाई सी तिलक स्मृति रनिङ्ग शिल्ड सनपा १४ डिभर्नालाई दोस्रो ए वाई सी तिलक स्मृति रनिङ्ग शिल्ड सनपा १४ डिभर्नालाई Slider
युवा परिषद्को आयोजनामा सञ्चालित दोस्रो एवाईसी तिलक स्मृति रनिङ्ग शिल्ड भलिवल प्रतियोगीताको उपाधि सन्धिखर्क नगरपालिका १४ डिभर्नाले हात पारेको छ ।
फाईनल खेलमा जुकेना गाविसको भलिवल समुहलाई हराउदै डिभर्नाले उपाधि चुमेको हो । गत बिहिवारबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा अर्घाखाँची जिल्लाका बिभिन्न गाविस र सन्धिखर्क नगरपालिकाका बिभिन्न वार्डका गरी १४ वटा भलिवल समुहको सहभागिता रहेको थियो । अर्घाखाँची युवा परिषद्ले संस्थापक अधक्ष्य तिलक खत्रीको स्मृतिमा बि.सं २०७२ साल देखि भलिवल प्रतियोगिता गर्दै आईरहेको छ । प्रतियोगितामा जुकेना गाविस द्वितीय र गत सालको उपाधि चुम्न सफल हंसपुरले ठाडा गाविसलाई हराउदै तृतीय स्थान प्राप्त गरेको छ । प्रतियोगितामा
प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुन सफल समुहले क्रमस ४० हजार , २० हजार, १० हजार नगद संगै मेडल, प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् । प्रतियोगिताको स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले जिल्लामा खेल गतिविधि अपेक्षित मात्रामा हुन नसकेको भन्दै युवाहरुको पहलमा आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका प्रतियोगिताको आयोजना गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । गौतमले खेल क्षेत्रको विकासका लागि जिल्ला विकास समितिले आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । अर्घाखाँची
युवा परिषद्का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भुसालले परिषद्ले हरेक वर्ष भलिवल प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भन्दै सबै क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले युवाहरुलाई खेल प्रति आर्कषित गरि प्रशिक्षित गर्न प्रतियोगिताले टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उद्घाटन शत्रमा परिषद्का महासचिव धर्म भुसाल, संस्थापक सचिव सहयोगी विसी लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
बिहिबार भएको पहिलो चरणको खेलमा सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. १४ र ढिकुरा गाविस, ठाडा गाविस र धनचौर गाविस, सन्धिखर्क वडा नं. ९ र हंसपुर गाविस र सन्धिखर्क
१ र सितापुर गाविस बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, पत्रकार, युवा तथा खेल प्रेमीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।